FolderMount [ROOT] android များအတွက် APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » FolderMount [ROOT]
FolderMount [ROOT] APK ကို
ROOT လိုအပ်ပါသည်။ ကသာမရှိရင် app ကိုဖြန့်ချိမည်မဟုတ်။
ပြဿနာရှိပါသလား? Play Store ရှိသည့် EMAIL ကိုထုတ်လုပ်သူများ link ကိုအသုံးပြုပါ။
ယနေ့တွင်တချို့ apps များအတွင်း SD ကဒ်ကျော် (ဥပမာဂိမ်း, podcasts, အော့ဖ်လိုင်း RSS ကိုအကြောင်းအရာ, ရုပ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, အော့ဖ်လိုင်းအညွှန်းဆော့ဖျဝဲ) ကြီးမားသောဖိုင်တွေသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပ SD က (~ 16-32GB) တွေအများကြီးပိုကြီးစဉ်ပုံမှန်အားဖြင့်သုံးစွဲသူများကိုသေးငယ်တဲ့ပြည်တွင်းရေး sd ကဒ်အရွယ်အစား (~ 64GB) ရှိသည်။ ဒီ app အသုံးပြုသူများသည်အများစုမှာ Play Store ကို default အနေဖြင့်အတွင်းပိုင်း sdcard မှာသူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာဒေတာသိမ်းဆည်းပြီးသူတို့သည်သင်၏ပြည်တွင်းရေး SD ကဒ်မှတ်ဉာဏ်ငတ်ဒီတော့ဒေတာတွေကိုသိမ်းထားဖို့ပြင်ပ SD ကဒ်သုံးစွဲဖို့ Option တစ်ခုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးထဲကနေ download လုပ်ပါ။ FolderMount ဤကိစ္စကိုမှဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီ app အားဖြင့်အမှန်တကယ်ပြင်ပကဒ်အတွက်ရှိကွောငျးအကြောင်းအရာနှင့်အတူပြည်တွင်းရေး sdcard ဖိုလ်ဒါ populating သင့်ရဲ့ပြင်ပ sdcard ထဲမှာဖိုလ်ဒါရန်သင့်ပြည်တွင်းရေး sdcard ထဲမှာဖိုလ်ဒါချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအခမဲ့အာကာသကူညီပေးသည်နှင့် uninstall လုပ်ဖို့မလိုဘဲတစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ကြီးတွေဒေတာနှင့်အတူမျိုးစုံဂိမ်း / apps များရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမပြင်ပ sdcard နှင့်အတူ Nexus Device များအဘို့, ဤလျှောက်လွှာကိုဥပမာတစ်ခု usb flash drive ကိုမှလင့်ခ်ဖိုလ်ဒါကိုကူညီသင့်ပါတယ်။
* ပြင်ပ SD ကဖိုလ်ဒါမှပြည်တွင်းရေး SD ကဒ်ဖိုလ်ဒါ Mount ။
* တစ်စုံကဆက်ပြောသည်သောအခါပြင်ပမှပြည်တွင်းရေးကနေ content တွေကိုရွှေ့ပါ။ (Dialog ကို prompt ကို)
* က Android 2.3 များအတွက်ပံ့ပိုးမှုစင်တာ - 5.0 ။
* ဟိုလိုတစ်လျှောက်လုံးအခြေတည်ကာအလိုလိုသိ GUI ကိုဒီဇိုင်း။
* ဒါကြောင့် sdcard တောင်ပေါ်မှာ status ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါက remount ပါလိမ့်မယ်။
အခမဲ့ app ရဲ့ကန့်သတ်:
* သာလျှင်ခွင့်ပြုခဲ့အားလုံးအတွက် mount 3
* ဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကိုဖော်ပြရန်ဖိုလ်ဒါများ၏အရွယ်အစားစာရင်းပြုစုမထားဘူး
* အချို့ကကန့်သတ်အရင်းအမြစ်ဖိုင်တွဲ၏အမျိုးအစားပေါ် / လမ်းကြောင်းအပေါ်လျှောက်ထား
ဤအကန့်သတ်သော့ဖွင့်ဖို့ကို app အတွင်းကနေ "လိုလားသူ" ဝယ်ယူရန်။
* ဖိုင်တွဲတစ်စုံထည့်ပါ။ source အတွင်းပိုင်း sdcard နဲ့ဦးတည်ရာသည်သင်၏ extSdCard ဖြစ်ပါသည်
* ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်, FM ရေသင်တို့အဘို့ဖိုင်များရွှေ့ဖို့ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့ကိုနှိပ်ပါ။
* ပြောင်းရွှေ့စစ်ဆင်ရေးအတွက် PIN နံပါတ်ကို click ပြီးရင်ပြုသည်အထိစောင့်ပါ။ PIN နံပါတ်စိမ်းလာပါလျှင်သင်အားလုံးအစုံပါပဲ။
* ထိုဖိုင်များကို mounting ပြီးနောက်အရင်းအမြစ်နှင့်ဦးတည်ရာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်မတည်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာမျှော်လင့်ထားသည့်နှင့်ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ပြည်တွင်းရေး sdcard ကိုထပ်ဗလာကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်, သင်သည်သင်၏ပြည်တွင်းရေး sdcard ထဲမှာတွေ့မြင်ဖိုင်တွေကိုအမှန်တကယ်ယခုသင့်ပြင်ပ sdcard ထဲမှာနေထိုင်သင် pair တစုံ "ဖြုတ်ရန်" ဆိုရင်။
အတူတူလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလုပ်ပေးပေမယ့်ဒီဟိုလိုရေးရာ app နဲ့တစ်ဦးအလိုလိုသိ interface ကိုနှင့်အတူသငျသညျကို Android 4.2 များအတွက်ပံ့ပိုးကူညီရောက်စေဖို့ပထမဦးဆုံးကြောင်းအခြားအက်ပ်ရှိပါတယ်။
အထူးကျေးဇူးတင်စကားဒီ app များ၏ဗီဒီယိုကိုပရိုမိုဖန်တီး Androidizen တတ်၏။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဒီ app ကိုမဆိုလမ်း, ပုံသဏ္ဍာန်, ဒါမှမဟုတ် form မှာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအာမခံမပေးပါဘူး။ ဒါဟာဒီ app အလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်, ငါ့တာဝန်မဟုတ်ပါဘူးသင့်ရဲ့ sdcard ချိုးသို့မဟုတ်သင့်ပေါက်စားတတ်၏။ အသုံးပြုသူသမ္မာသတိအကြံပြုသည်။
အချည်းနှီးသော Folder ကို ...
အော်တိုလွယ်ပါတယ် ROM ကို ...
နိုဝင်ဘာလ 5, 2017 မှာ 4: 40 ညနေ
USELESD ... ကိုယ့်ငါ့အလိုရှိသမျှဒေတာဂိမ်းများကို delete / ပျောက်ကွယ်သွားပြန်နှင့်ရုတ်တရက်ဒီ app.then il ဖြုတ်ငါ့ဂိမ်းများကို mount ။
Rado မသန် says:
ဇွန်လ 16, 2015 မှာ 11: 04 နံနက်
မင်္ဂလာပါဒီ app ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ သာသာသုံး app များကို mount နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကို goto ကိုအခြား app.I ချင် that.If ထက်မပိုဤအကြံပြုမဟုတ်ဘူး။
monaliza gadin says:
မေလ 24, 2015 မှာ 4: 15 နံနက်
nice app များကို !!!